Xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka federaalka oo maanta xasaanaddooda loo dhaariyey – Radio Daljir
Xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka federaalka oo maanta xasaanaddooda loo dhaariyey
Maarso 31, 2013 10:33 b 0
Muqdisho, March 31 Mudanayaasha baarlamaanka dawladda federaalka oo ku guda jiray kalfadhigoodii labaad ee ay yeeshaan tan iyo markii la asaasay ayaa maanta oo (Axad ah) waxaa fadhigoodii ay uga hadleen qodobo guud ee xaaladda dalka quseeya iyo kuwo wakiillada u gaar ah.
Fadhiga oo ay ka soo xaadireen in ka badan 160 xildhibaan ayaa waxaa shir guddoominayey kuxigeenka afhayeenka wakiillada Jaylaani Nuur Iikar, waxaana wakhtigoodii maanta ay ku dhammaysteen warbixinno laga dhegaysanayey mudanayaal baarlamaanka ka mid ah oo safarro kala duwan ku tagay gobolo dalka ka mid ah oo Puntland ay ku jirtay.
Xildhibaannadu, waxaa kale oo maanta shirkooda ?ay meeleeyeen dhaarinta dhawr xildhibaan oo ku soo biiray baarlamaanka, kuwaasi oo lagu baddelay boosaska xildhibaanno geeri ka bannaysay jagooyinka.
Intii badnayd ee fadhiga maanta waxaa la siiyey warbixinnada xildhibaannadu soo gudbinayeen, waxaana halkaasi khudbado xog-warramid ah ka jeediyey mudanayaal safarro ku tagay Puntland, gobollada koonfureed ee dalka iyo gobollada dhexe, waxaana baarlamaanka hortiisa ka sheegeen waxyaabihii ay soo arkeen ee iskugu jiray amniga, hormarka, dhaqaalaha, maamulka iyo baahiyaha wax ka qabashada u baahan.
Caawa iyo Daljir, Axad March, 31-2013, Cabdifataax Cumar Geeddi ‘ (Daljir Boosaaso)
Dawlada iyo Waxgaradka PL oo ku guulaystay siidaynta nin ka soo jeeda Galmudug oo u afduubnaa dad lagu haysto Glmudug